[Ukara] Wondershare AllMyMusic for Mac: Record Online Music
Record Audio ọ bụla na Online Stream
Gbalịa Ọ Free Mac OS X 10.6 - 10.10 Buy Ugbu a
Ihe ị na-: ihe niile ị chọrọ Record gụgharia Audio
Nweta ọkacha mmasị gị songs, mmemme redịo, na audio si videos faịlụ n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla.
Download faịlụ gị na kọmputa na AllMyMusic for Mac na i nwere ike na-ege ntị ha na-enweghị njikọ Ịntanetị.
AllMyMusic for Mac Complies nile nwebisiinka iwu na bụ 100% iwu iji.
Nchekwa onwe-Ịchọpụta Audio iyi
Ọ bụrụ na audio na-akpọ na kọmputa gị - ma na a video, site na online redio, ma ọ bụ na a omume - AllMyMusic for Mac nwere ike ịchọpụta na ọ na ndekọ.
Dị nnọọ kụrụ "Record" na software ga-eme ndị ọzọ.
Zero Ogo Loss
Record audio faịlụ na 1: 1 mma.
AllMyMusic for Mac Eji a mebere ụda kaadị idekọ ọ bụla ọdịyo egwuri site na kọmputa gị si ụda kaadị - echebekwa 100% nke mbụ audio mma.
Akpaghị aka Kpido Your Music
AllMyMusic for Mac Na-akpaghị aka na-achịkọta ihe-nkọwa nke ndekọ (dị ka na-ese, album, na genre), nāwa osisi nọ egwu, na nzà si na mgbasa ozi. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịzọpụta ka ọ bụ, ma ọ bụ dezie ozi ọ bụla iji hazie faịlụ.
Kpokọta Your Favorite Playlist n'ime a CD
A music Toolkit-enyere gị aka ọkụ ọkacha mmasị gị listi ọkpụkpọ iji CD. Ọ bụ nnọọ mfe na mgbanwe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ihe dị mfe ikpuru-na-dobe mgbe launching CD burner.
-Arụ ọrụ na Top Sites
Capture audio si n'elu 500 na-ewu ewu na redio ụgbọ na online music saịtị gụnyere YouTube, Pandora, Spotify, iTunes Radio, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Wụnye Wondershare AllMyMusic
Pịa Record ka ịmalite ndekọ
Tinye ka iTunes
Nyocha ahịa anyị Na AllMyMusic for Mac - na ị ga-, Oke
Tinye gị Review
Apr 27,2015 11:57 am
Nnọọ ihe kasị mma ngwa n'ihi na ndekọ music ihe atụ
Apr 26,2015 17:46 pm
M na a na-achọ afọ n'ihi na a ngwaahịa dị ka nke a .. WonderShare ọ ziri ezi. Kpamkpam ruru ego.
G UKWUO Nyocha
Otú aha Wondershare AllMyMusic?
Esi wepụ mgbasa ozi ma ọ bụ obere na-ezughị ezu ọdịyo faịlụ.
Gịnị na-eme mgbe music mkpado-apụghị enwetara?
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na mebere ọdịyo ndekọ ọkwọ ụgbọala na-emezughị na-arụnyere?
Olee otú iji tọghata Spotify ka MP3
3 Ụzọ ka Download Deezer Music
Olee otú Download Music si Spotify
YouTube ka iTunes Ntụgharị: Olee otú Download YouTube Music ka iTunes
WONDERHSHARE-atụ aro Ngwaahịa